Iipesenti ezi-3 ezivulekileyo zabavelisi kunye nabaxhasi - iTshayina 3% yokuVuleka kweFektri
Ilaphu leRoller Shade
Ukukhetha igumbi labantwana elingaboniyo, akufuneki kuphela ukuba liqwalasele ubuhle bekhethini ngokwalo, kodwa ikwahlanganisa isitayile sendlu iphela ukuze ifanelane.
Umzekelo umbala wamakhethini, umbala wamakhethini kufuneka ufane nenkqubo yombala wegumbi ukugcina ubuhle begumbi liphela, kunye nokukhusela imeko yokuxinana.
Ububanzi obuCwangcisiweyo base China ukuhombisa iiKhethini zeKhethini Shading Shutter Blinds Fabric
Khetha ububanzi ngokwezifiso blinds ilaphu ngenxa yezizathu ezininzi
Ukukhawuleza kombala: Kwindawo yokukhanya kwelanga yexesha elide, umbala ongxamisekileyo wokuhombisa ifestile uyimfamekisa ilaphu idinga imigangatho ethile yokuthintela ilaphu lekhethini lewindow ukuba libune. Ukongeza, iimveliso zekhusi zangaphandle ezifakwayo kufuneka zinomsebenzi wokucoca ngokwakho.
Amandla eqine: Kwimveliso enoxinzelelo olucacileyo okanye iimfuno zoqine, amandla eqine esimbozo sefestile kufuneka athathelwe ingqalelo
Imitha yeSolar yeZinto eziSolwayo zoMbane oMbane oMnyama oMnyama oMnyama
Ilaphu leWindow Blind
Xa kuziwa kwimathiriyeli yelanga, abantu bacinga kuqala ziifom zezicelo zezixhobo ezilukhuni ezahlukeneyo kwiimveliso zelanga. Kodwa ukusuka kwimbali yophuhliso lwezinto ezenziwe ngelanga, amalaphu elanga luhlobo lwelaphu elinophuhliso lwexesha elide. Ukusuka kwimbono yehlabathi, itekhnoloji yelaphu elenzelwe ilanga iya isiba nkulu ngakumbi nangakumbi.
Flame nekudodobalisa zokhuseleko Ilanga Solar Cell Blinds Screen Blinds Ilaphu
Amaxabiso e-Roller Blinds
Njengoko igama lisitsho, amalaphu e-sunscreen ye-polyester yelanga ziilaphu ezinokuthintela ukukhanya kwelanga kunye nokucoca ukukhanya kwelanga, ilaphu elikhuselayo elangeni linokwenza igumbi likhanye ngakumbi, lithambe kwaye libe nendalo. indlu ithule cwaka kwaye inoxolo ukuze abantu bakhululwe. izinto ngokubanzi zelanga yelanga elangeni yelaphu zii-polyester kunye ne-PVC amalaphu okwenziwa, ukuvuleka kwelaphu elangeni lihlukile, lisusela kwi-1% ukuya kwi-10% elenza ukuba kwenzeke ukuba zingaphi iipesenti zombono wangaphandle onokubonwa ngaphakathi nangaphakathi ngexesha elinye , umbono ongaphakathi awunakuba yingxowa-mali ukuba ubona ngaphandle kwesakhiwo, oko kubizwa ngokuba yindlela enye. Amalaphu kwesikrini esimnyama ngokuqhelekileyo ahlala emlilweni kunye amalangatye-nekudodobalisa ilangatye, amabakala ahlukeneyo nelangatye-nekudodobalisa, ubunzima, ubukhulu, njl kukhokelela umahluko amaxabiso ngelaphu elangeni.
Ngaphakathi Ilanga le-Antistatic Dust Proof Ubungqina boKhuseleko lweSolar amalaphu
Ukuvuleka kwelaphu leseli yelanga
Ukuvuleka kwelaphu elikhuselayo elangeni kuthetha inqanaba lemingxunya emincinci edityaniswe yi-warp kunye ne-weft yelaphu lomthunzi, kusetyenziswa imicu yombala ofanayo kunye nobubanzi ukuluka ubume obufanayo, ukukwazi ukuthintela ubushushu obukhazimlayo belanga kunye nolawulo lwelitha ngomlinganiselo omncinci wokuvula yomelele kunaleyo ine-aperture ratio enkulu.
Iwindows Roller yangaphandle yeLanga yeVinyl yeLascreen Blinds Ilaphu
I-China Roller Blinds
Okwangoku, kukho iimveliso ezahlukeneyo zelanga ezivenkileni. Kubathengi, ungazithenga njani iimveliso ezilungileyo kwiimveliso ezininzi? Ngokubanzi, inokwahlulwa kula manqaku alandelayo.
(1) Ibhranti: Khetha iimveliso ezinolwazi oluphezulu lwegama, kwaye umgangatho kunye neenkonzo zentengiso kufuneka ziqinisekiswe;
Iifashoni zitshintsha rhoqo, kwaye imibala eqinileyo ihlala isebenza kwisangqa sefashoni ngenxa yokufutshane, kodwa hayi izinto ezidikayo. Imfama eqinileyo yemibala ilula kunye nomoya, oya kuthi nangoko wongeze imeko esemgangathweni kwisimo sakho sasekhaya. Masivumele iQela likubonise izakhono zemidlalo eqinileyo yemibala!
1. Umanyano lwethoni iyonke
Ngapha koko, kulula ukuthelekisa amakhethini anemibala eqinileyo. Ukuba u-newbie, ungayithathela ingqalelo. Xa ukhetha amakhethini aqinileyo, unganqwenela ukuzama ukudibanisa ngetoni yonke. Nangona isiphumo somboniso singenamandla, silula kwaye sinesisa.